Novambra 11, 2018 stream flo orinasa Canada
Tongasoa tsara ny Canada Stream Flo Company hitsidika cepai Amin'ny 14:00 hariva amin'ny 11 Novambra 2018, Curtis altmiks, talen'ny fividianana varotra Global Stream Company any Canada, ary Trish Nadeau, mpanadihady momba ny famatsiana, miaraka amin'i Cai Hui, tale jeneralin'ny Shang ...
Tongasoa eto amin-kafanam-po Andriamatoa Shan avy any Oman hitsidika an'i Cepai Tamin'ny 30 martsa 2017, Andriamatoa Shan, ny tale jeneralin'ny Middle East Petroleum Services Company ao Oman, miaraka amin'ny mpandika teny Andriamatoa Wang Lin, dia nitsidika an'i Cepai manokana. Ity no fitsidihan'i Andriamatoa Shan voalohany an'i Cepai. Be ...
Tongasoa tsara ny mpanjifa ejipsiana Andriamatoa Khaled sy ireo mpiara-miasa aminy hitsidika an'i Cepai Ny marainan'ny 18 martsa 2017, mpanjifa ejipsianina efatra, Andriamatoa Khaled sy Andriamatoa hangcame ho any Andrefana mba hitsidika sy hanara-maso, miaraka amin'ny mpitantana raharaham-barotra vahiny Liang Yuexing. Ao amin'ny 20 ...
8 martsa 2017 Bestway oilfield Inc.
Miarahaba antsika Mr.Gus.Dwairy, lehiben'ny BESTWAY OILFIELD INC., Etazonia, nitarika delegasiona iray hitsidika ny CEPAI. Tamin'ny 8 martsa 2017, tonga tany Cepai ny lehiben'ny BESTWAY OILFIELD INC., AndriamatoaGus Dwairy, AndriamatoaRonny.Dwairy ary Andriamatoa Li Lianggen mba hitsidika sy hanadihady momba ny resaka ...
Tamin'ny 9 ora maraina tamin'ny 7 martsa, Paul Wang, filohan'ny C&W International Fabricators any Etazonia, niaraka tamin'i Zhong Cheng, mpitantana ny sampan'i Shanghai, dia tonga tao amin'ny Cepai Group izy ireo mba hizaha sy hamotopotorana. Andriamatoa Liang ...
Miarahaba antsika Andriamatoa Steve, tale jeneralin'ny varotra fitaovana Redco Ltd., Canada, hitsidika ny orinasanay ary hanome torolàlana ho an'ny asanay.
Tamin'ny 23 aprily, Andriamatoa Steve, tale jeneralin'ny varotra fitaovana Redco Ltd., Canada, dia nitsidika an'i Cepai Group niaraka tamin'ny vadiny. Liang Yuexing, mpitantana raharaham-bahiny vahiny ao amin'ny Cepai Group, dia niaraka taminy tamim-pitiavana. Tamin'ny 2014 ...
Andriamatoa GENA, Tale Jeneralin'ny KNG Group of Russia, dia nitarika delegasiona iray hitsidika an'i Cepai ary hiady hevitra momba ny fiaraha-miasa
Tamin'ny 9 ora maraina tamin'ny 17 Mey, Andriamatoa GENA, Tale Jeneralin'ny Rosiana KNG Group Company, miaraka amin'Andriamatoa RUBTSOV, Tale Teknika ary Andriamatoa Alexander, Tale Mpanatanteraka, dia nitsidika ny Cepai Group ary nifanakalo hevitra momba ny fiaraha-miasa. Niaraka tamin'i Zheng Xueli, mpitantana ny depa varotra ...
Mandeha be ny tetik'asa Babu amin'ny 28 martsa 2019
Tamin'ny 28 martsa, Andriamatoa Wael sy Andriamatoa Thomas, mpitarika tetik'asa roa an'ny The Uae Azabia Petroleum Company (ADNOC), ary Andriamatoa Li Jiqing, lehiben'ny fividianana entana manerantany an'ny China Petroleum Engineering and Construction Co., LTD. (CPECC), tonga tao amin'ny orinasa mba hifanakalo hevitra sy hitarika ny wor ...
Navoaka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 25 martsa 2019 ny tetikasa Adabia
Tamin'ny 25 martsa, Andriamatoa Pramod, lehiben'ny fividianana ny Uae Azabia Petroleum Company (ADNOC) sy Andriamatoa Hossam, lehiben'ny kalitaon'ny ARCHIRODON, dia nitsidika ny delegasiona Andrefana hanadihady sy hitsidika ny tetikasa Adabia. Andriamatoa Liang Guihua, filohan'ny CEPAI Group, no nitarika ny varotra vahiny ...